Indostrian'ny fanaintainan'ny indostria sy ny tombotsoan'ny vokatra - Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd.
Raha ny fahitana ny tsena fibre karbaona eran-tany, ny anjaran'ny tsenan'ny fibre carbon an'ny fireneko tamin'ny taona 2019 dia nisondrotra tamin'ny 22,8% tamin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 31,7%, izay nahafa-po. Izy io dia mifandraika akaiky amin'ny ezaky ny orinasa hanatsarana ny tanjaka anatiny sy hanatsara ny kalitaony ary hampihena ny fandaniana mandritra ny taona maro. Raha ny fahitana ny vidiny, amin'ny taona 2019, noho ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola be eo amin'ny tsena iraisampirenena sy ny fanatsarana hatrany ny haavon'ny fifehezana ny indostrian'ny fibre karbonika ao amin'ny fireneko, ny vidin'ny fibre karbonina any amin'ny fireneko sy ny vidin'ny vokatra iraisam-pirenena dia efa fanjakana mandanjalanja, izay nahatonga ny fibre karbaona tanindrazako sy ny fanondranana vokatra amina andiany lasa nanjary azo atao. Miaraka amin'ireo fanitsiana mifanaraka amin'ny fireneko amin'ny taha tahan'ny fihenam-bidy amin'ny fanondranana, ny orinasa fibre karbaona dia afaka mieritreritra ny hanararaotra ny fotoana hanitarana ny tsena any ivelany.
Ny votoatin'ny fantsona fibre carbon dia ny fibre carbon. Ny kibon'ny karbaona dia manana tanjaka mahery, malefaka ary fanodinana mora, indrindra ny fananana mekanika dia tena tsara. Ny fibre karbonika dia manana tanjaka avo sy lanjany maivana. Raha ampitahaina amin'ny kofehy avo lenta avo lenta, ny fibre carbon dia manana tanjaka manokana sy modulus manokana.
Na izany aza, ny fanaovana fantsona fibre karbaona lehibe kokoa ny savaivony sy ny halavany lava dia olana lehibe teo amin'ny sehatry ny fibre carbon. Ity koa dia teboka fanaintainana lehibe ho an'ny indostria fantsona fibre karbaona iray manontolo. Tsy ny teknolojia famokarana ihany no voafetra, fa manana fifandraisana lehibe amin'ireo fitaovana famokarana ihany koa. Mba hamahana izany olana izany, ny orinasanay dia tsy nanakarama teknisianina matihanina be karama ihany, fa nandany vola be koa hanamboarana fitaovana famokarana mandroso. Nampiroborobo ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fibre carbon.